1. Yintoni i-Alarelin?
3. Ukusetyenziswa kweAlarelin
4. I-Alarelin Ukusetyenziswa kweeReferensi
5. IArirelin Benefits
I-horonone ye-Gonadotrophin-release (Alarelin) inokuchazwa njenge-synthetic LR-RH agonist, esebenza ngokuvuselela umveliso kunye nokukhululwa kwe-LH ne-FSH kwiingqungquthela zakho. Isilwanyana sithandwa ngokubaluleka kwe-ovulation kunye nokunyangwa kwe-endometriosis. Isiza liye sanikela iziphumo eziphezulu kuba zifumanisiwe zinokuba luncedo olungakumbi kunokuba isongezelelo sokuguga. I-Alarelin ifumaneka kwiivenkile zombini nakwizakhiwo. Nangona kunjalo, soloko uqinisekisa ukuba uthenga i-Alarelin ukusuka kwi umvelisi othembekileyo wase-Alarelin. I-Alarelin ukuthengiswa ingahlukahluka komenzi omnye ukuya kwelinye ngokwemigangatho kunye nemigangatho. Zininzi Abaphakeli be-Alarelin kwiimarike kodwa thabatha ixesha lakho ukukhangela okulungileyo. Uqinisekiso lweziyobisi luqinisekisa iziphumo eziphezulu zeAlarelin.
I-Alarelin yemvelo (79561-22-1) iifom zikhoyo kwizilwanyana kwaye zisetyenziselwa ukunyusa ama-ovulation kumazi. Iinguqu ze-Alarelin zenziwe nge-antagonist ye-LH-RH ebekwe kwiidayiti ezinkulu eziphezulu kune-LH-RH yemvelo enokufumaneka kwi-gonadotroptic secretions in vitro okanye i-ovulation. Umsebenzi wase-Alarelin kukuqala ukukhupha i-pituitary gland ukuvelisa ngaphezulu kwe-FSH-LH.
Njengoko kukhankanywe ngasentla, i-Alarelin, xa ifikelele emzimbeni wakho, ivuselela izigulane zakho zokuvelisa ii-hormone zeLuteinizing (LH) kunye ne-hormone evuselela i-Follicle. Amahomoni amabini adlala indima ebalulekileyo kumjikelezo wonke wokuvelisa umfazi. Ukulawula ulawulo lwe-FSH, iinkqubo zokuzala, kunye nokuvuthwa kwe-pubertal. Ngakolunye uhlangothi, kuma-females, i-HH i-hormone ibangela ukuphuhliswa kwe-corpus luteum kunye nenkqubo ye-ovulation. Kwindoda, u-Alarelin usebenza ngokukhuthaza umveliso we-hormone ye testosterone. Ukuze uphumelele ukuvelisa umzimba, umzimba wakho kufuneka ube kwindawo yokuvelisa i-LH ne-FSH ngokwaneleyo. Peptide Alarelin kunokuba luncedo olukhulu ekuphuculeni umveliso wee-hormone ezibini ezibalulekileyo. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba uthathe isibisi phantsi komyalelo wonyango ukuze ugweme ukufumana iziphumo eziphambili. I-Alarelin isebenza kakuhle xa uthatha isilinganisi esifanelekileyo kwaye unamathele kumyalelo wokusetyenziswa kwegqirha wase-Alarelin. Unokuphinda ucele umthengisi wase-Alarelin ngakumbi malunga neziyobisi xa ufuna enye ingcaciso.
I-Alarelin isetyenziswa kakhulu kuphando lwezokwelapha ukuqonda iziphumo zeziyobisi kumzimba wezilwanyana ngokunjalo kwiimeko ezinxulumene nophando lokuzala. Ngoko, ngoku, isiqulatho siye safumanisa ukuba siphakathi kwezona zinto zincomekayo zokuncedisa imizimba yabantu, ingakumbi abasetyhini, ekuphuculeni iinkqubo zabo zokuzala. Amadoda angasebenzisa le nkunkuma ukuphucula imveliso ye-hormone ye testosterone. Isicelo sase-Alarelin sincike kwisigqirha sakho segqirha. Isilwanyana sifumaneka kwifom Ugqirha wakho uya kuba ngumntu ongcono ukukukhokelela kwisicelo se-Alarelin malunga nesimo sakho sezonyango emva kokuba uqalise uviwo lwezonyango. Ikhusi Alarelin powder iziyobisi zisetyenziselwa ukuphatha i-Endometriosis okanye i-Hysteromyoma.
Ngeenjini, uzakufuneka ulungele umlinganiselo we-Alarelin rhoqo kwaye ufumane injola kumayeza akho. Unokuzifaka kwakhona ekhaya kodwa qiniseka ukuba ugqirha wakho uqeqesha phambi kokuba uqale ukulawula umyinge. Khumbula, ungabonwanga Ukusetyenziswa kwe-Alarelin Kananjalo kungonakalisa impilo yakho okanye kunokukhokelela kwezinye iingxaki zempilo. Ukuthengwa kwe-Alarelin ukuthengiswa phezu kwe-counter kungabangela ingozi ngakumbi ukuba uyifumana kwinkampani ongenakuyithemba. Umkhiqizi ohloniphekileyo wase-Alarelin kufuneka akunike isikhokelo sokusetyenziswa kweziyobisi. Ugqirha wakho kufuneka kwakhona, akuncede ekuthengeni i-peptide e-Alarelin okanye ungayifumana kalula kwiwebsite yethu.
4.I-Alarelin Ukusetyenziswa kweeReferensi
I-Alarelin kufuneka isetyenziswe ngendlela elandelayo;
Thatha i-gauze ye-alcohol to the top of both vial of pealde
Ngoku unesirinji ye-1cc uze uthathe i-diluent yakho ekhethiweyo. Khetha umlinganiselo ochanekileyo njengokuba ugqirha ugqirha wakho kwaye ungahambi ukuya ngaphantsi okanye ngaphezulu kunqunyiwe; oko kunokukhokelela kwimiphumo emibi okanye ukungaphumeleli ukufunyanwa Iziphumo zeAlarelin.1 ml okanye (cc) nge-10mg ye-melanotan ithetha ukuba i-Alarelin yakho imilinganiselo kufanele ibe ngamanqaku alishumi kwi-U100 slin syringe elingana no-1mg we-Melanotan. Ngakolunye uhlangothi, i-2 ml 9cc) nge-10mg ye-melanotan ithetha amanqaku ayishumi kwi-syringe ye-U100 ifana ne-1mg melanotan.
Emva kwamanyathelo angentla angoku, thabatha inaliti yakho equle i diluent uze uyiqhube kwi powder yakho ephihliweyo kwaye uvumele i-diluent iphele i-peptide yakho.
Emva kokuba i diluent yongezwa kwibhotile, ngoku ngokukhawuleza uyasisombulula isisombululo kodwa ungayigxininisi ngamandla kuze kube yilapho zonke i-powders eziphihliweyo kwaye zihlala zicacile
isisombululo. Ngoku i-Alarelin yakho ilungele ukusetshenziswa
Thenga i-Alarelin evela kumthengisi onolwazi kunye noluthembekileyo ukuze ujonge iziphumo eziphezulu ze-Alarelin. Egqibelele Alarelin ukuthengiswa kufuneka unikezele ngeenzuzo ezilandelayo;
Uphucula amanqanaba e testosterone kumadoda
Isilwanyana kulula ukuyisebenzisa, kwaye siyaphatha i-Endometriosis kumabhinqa. Qinisekisa ukuba ulandela ukuxubusha kunye ne-Alarelin i-dosagein izakhiwo zokufumana iziphumo ezingcono.
Ikhuthaze i-pituitary gland ukuvelisa ngaphezulu i-LH ne-FSH.
Ihambisa umgangatho kunye neziphumo zexesha elide xa zisetyenziswe ngokuchanekileyo.
Isilwanyana sifumaneka lula kwiwebhusayithi yethu, kwaye senza ngokukhawuleza ukuhanjiswa.
Nje ngezinye iip peptides, i-Alarelin inokunceda ekunciphiseni iimpawu zokuguga.
Iingxaki zokuvelisa izisombululo kubasetyhini.
Ngaphandle kweenzuzo eziyaziwayo zeAlarelin, le nkunkuma nayo inegalelo elimnyama xa kunjalo xa kuninzi. Nangona kunjalo, izidumbu zabantu zenziwa ngendlela eyahlukeneyo kwimveliso eyahlukeneyo. Abanye abantu banemiphumo embalwa yecala xa abanye banokuba namava ambi nangemva kokulandela isicelo sokunene saseAlarelin. Kuyafana noko kubasebenzisi be-Peptide Alarelin kwaye bajonga iimpendulo zeemveliso, uya kuqaphela ukuba uninzi lwabasebenzisi beziyobisi lonwabile ngamachiza, kodwa icandelo labasebenzisi liye lafumana amava amaninzi kunye nesongezelelo esifanayo. Ezinye zeziphumo ezincinci zeArarelin zibandakanya;
Ukongezwa kwamanzi okugcinwa kubangelwa ukudlula i-drug
Iintlungu okanye utywala malunga neendawo zokungenwa
Ingakhokelela ekulahlekeni kwesisindo / ukuzuza.
Ngakolunye uhlangothi, kukho ezinye iziphumo ezibi kakhulu zeAralin ezinokuthi uzive ngexesha uthabatha amayeza akho, kwaye zixhomekeke kwindlela umzimba wakho uphatha ngayo neziyobisi. Abasebenzisi abagqithiseleyo imichiza kakhulu bafumana igalelo eliphambili le-Alarelin, kodwa akusoloko kunjalo. Xa ubona nayiphi na imizwa okanye imiqondiso ekhethekileyo qhagamshelana nogqirha wakho kwangoko ngaphambi kokuba imeko imbi kakhulu. Ezinye zeempembelelo ezibi zibandakanya;
Imiphumo ayigcini kwizinto ezikhankanyiweyo kuba abantu abahlukileyo banamava ahlukeneyo kodwa qiniseka ukuba uya kwiimviwo zonyango rhoqo xa uthatha umlinganiselo wakho we-Alarelin.
Emva kokufumana amayeza avela kumthengisi wase-Alarelin inxalenye eseleyo yokugcina yonke imfanelo yakho. Umvelisi waseAlarelin Kuya kukukhumbuza nendlela yokugcina isilwanyana. Ukugcinwa okufanelekileyo kuya kukuqinisekisa ukuba uncedo oluphezulu lwe-Alarelin. Ngokuqhelekileyo, eli liyeza lizinzile kwiqondo lokushisa, kodwa ukuba kufuneka ulisebenzise malunga neveki ezintathu, kufuneka ugcine i-Alarelin kwindawo eneenxa zonke -18 degrees Celsius. Ngeentsuku ze-2-7 zokusetyenziswa, i-4 degrees Celsius iya kuba yimeko efanelekileyo yokugcina. Ukuba uceba ukusetyenziswa kwesi sidakamizwa ixesha elide, kunconywa ukuba ungeze iiprotheyini zenkampani ezifana ne-0.1% BSA OKANYE. Khumbula ukukhusela imijikelezo ye-frozen-thaw ngenkathi ugcina le nkunkuma.
Wei, S., Gong, Z., Dong, J., Xie, K., Wei, M., Zhang, J., & Wang, J. (2012). Iimpembelelo ze-alarelin ezikhuselekileyo ezikhuselekileyo ekubonakalisweni kwe-GnRHR, i-FSHR kunye ne-LHR kwi-pituitary kunye ne-GnRHR ukusasazwa kwii-ovari zezimvu. Jiangsu Journal of Science Sciences, 28(1), 114-120.
Zhang, S., Han, J., Leng, G, Di, X., Sha, C., Zhang, X., ... & Liu, W. (2014). Indlela ye-LC-MS / MS yokuzimisela ngokukhawuleza kwe-goserelin kunye ne-testosterone kwi-plasma ye-rat ukuze uphando lwe-pharmacokinetic kunye ne-pharmacodynamic. Umbhalo weChromatography B, 965, 183-189.
Ararooti, ​​T., Niasari-Naslaji, A., Asadi-Moghaddam, B., Razavi, K., & Panahi, F. (2018). Impendulo engaphezu kwesifo esiphezulu emva kwe-FSH, eCG-FSH kunye ne-hMG kunye neerhafu zokukhulelwa zilandela ukutshintshwa kweembumba ezinobunzima be-blastocyst kunye nobubanzi obuhlukeneyo kunye nomumo kwikamela le-dromedary. Theriogenology, 106, 149-156.